Sayensị Ọdịnaya: Njikọ Njikọ | Blog MarTech
Sayensị Ọdịnaya: Tụgharịa njikọ gị Plain Jane n'ime Ọdịnaya Contextual Ọdịnaya
Mọnde, Jenụwarị 11, 2010 Sunday, October 4, 2015 Taulbee Jackson
Gini ka Washington Post, BBC News, na New York Times nwere ihe jikọrọ? Ha na-eme ka ihe ngosi ọdịnaya maka njikọ na weebụsaịtị ha, na-eji ngwá ọrụ akpọrọ Udiri. Kama njikọ ederede ederede dị mfe, njikọ Apture na-ebute windo mmapụta na òké n'elu nke nwere ike igosipụta ọdịnaya dịgasị iche iche metụtara ọdịnaya.
N'ebe a na-ebipụta akwụkwọ, Apture na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ode akwụkwọ ịchọta, jikọta ya, ma gosipụta ọdịnaya metụtara ya na ntinye blọgụ ha. Naanị gosipụta ederede ịchọrọ ijikọ, yana otu pịa, ngwa mgbakwunye Apture - nke dị na ihe ọ bụla gbasara ikpo okwu ntanetị na-ewu ewu - na-achọ ịntanetị maka ụdị dị iche iche nke ọdịnaya metụtara ọdịnaya, wee gbanwee ederede gị ka ọ bụrụ nkwafu, njikọ ọgaranya mgbasa ozi na-enye aka.
Otu uru ndị na - agụ akwụkwọ gị bara bụ ịnweta ngwa ngwa nke ozi ndị ọzọ. Mousing n'elu njikọ ga-egosipụta obere mmapụta window na-egosi ọdịnaya kpọmkwem metụtara okwu. Nke a nwere ike ịbụ vidiyo Youtube, ntinye Wikipedia, ma ọ bụ ọbụna ezigbo nsonaazụ ọchụchọ Twitter.
Dị ka ọ dị, njikọ ndị a nwere ike iwepụ ndị ọrụ na post gị, ọbụlagodi na ha chọrọ ịchọta obere ozi. Kama ịnwe ike izipu onye ọrụ gị na saịtị ọzọ, Apture ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma na-egosipụta ọdịnaya onye ọrụ ahụ nwere ike ịmasị ịgagharị, yana dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na-anwa ịlele mmasị ha ma ọ bụ ajụjụ ha n'ime post gị n'onwe ya.
Ebumnuche dị n'azụ Apture bụ ime ka post gị sie ike, yana, ọ kwesịrị, gbakwunye oge na saịtị - ọnụọgụ dị mkpa maka ọtụtụ ndị ahịa ahịa.
Na ihe niile nchịkọta junkies si n'ebe, ị nwere ike soro njikọ site na Apture si nchịkọta ọrụ na ụdị akwụ ụgwọ. Rịba ama na ọ bụ ezie na plugins ikpo okwu na-ebipụta akwụkwọ maka Apture na-ewepụta njikọ nke Google na-ahụ dịka njikọ ochie oge niile, ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị anaghị ewepụta njikọ nke engines na-achọpụta.
Anyị na-eji WordPress mbipute nke Apture na ugbu a iteration nke anyị blog, na dịka ụlọ ọrụ na naanị na-eme ọdịnaya - ụbọchị niile, kwa ụbọchị - rue ugbu a, ọ masịrị anyị n’ezie. Ndị na-emepụta ọdịnaya anyị nwere ihe ndị dị mma ikwu. Ọ na - enyere aka maka ihe ndị na - atọ ụtọ na nke bara uru, yana na - enyere aka na - ewepụta echiche ọhụụ - ma na - eme ka echiche ndị anyị nwere nwere ike ịbanye na onye ọrụ ahụ.
Gbalịa mee ihe ngosi nke Apture na saịtị ha - ọ na - eme ka ọdịnaya dị ụtọ, na blọọgụ gị na - arụ ọrụ nke ọma.
Tags: aptclicknjikọ pịanjikọmonetizing njikọakwụ ụgwọ pịapopup njikọnjikọ nnyapade
Taulbee Jackson bụ Onye isi ala / onye isi oche nke Raidious Digital Content Services.
Raidious bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa dijitalụ nke e wuru iji mee, jikwaa, nyochaa, agafeghị oke na ịlele ọdịnaya na ntanetị na mkparịta ụka na ezigbo oge, na-eji otu ndị ọkachamara, ndị edemede, ndị editọ, ndị na-emepụta ihe, na ndị na-ede akụkọ na-arụ ọrụ dịka otu akụkọ akụkọ CNN maka ụdị. Chọpụta ihe na raidious.com.
A obere Web Design Gbanwee na Nnukwu Mmetụta
Jan 12, 2010 na 12: 16 AM
Udo nke Ohere na-eweputa ihe omuma bu ihe ojoo! Chaị - ngwa dị egwu. Ọ dị ka ụzọ dị ịtụnanya iji bulie ọdịnaya gị, mana, ikekwe, ụfọdụ na-emebiga ihe ókè mgbe enwere njikọ ebe niile. Ọ ga-amasi m ịhụ etu o si emetụta oge na ibe, ọnụego ibiaghachi na ntụgharị!
Daalụ maka ịkekọrịta - teknụzụ dị ịtụnanya. 😎
Jan 12, 2010 na 12: 31 AM
Ọ dị mfe iburu ihe eji egwuri egwu ọhụrụ. . . ọbụghị ma m ga-eme nke ahụ. . . 😉
Anyị mejupụtara Apture n’etiti ọnwa Disemba, na nlele ngwa ngwa na nyocha anyị na-egosi ọtụtụ echiche ihu igwe, ọnụego mgbago ala, na oge dị ukwuu na saịtị - mana blọọgụ anyị bụ obere nwata, nke a nwere ike ịbụ maka ọtụtụ ebumnuche dị iche, o yikarịrị ka ọ bụ ngbanwe okike nke blog. (nwekwara ike ịbụ ọdịnaya,.. 😀)